Akon’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana – 2005 · Global Voices teny Malagasy
Akon'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana – 2005
Voadika ny 01 Desambra 2018 12:38 GMT
Ny Afrique Magazine (amin'ny teny Frantsay) dia manana lahatsoratra avy amin'ny anarana hoe “Blogmania Au Maghreb” miresaka momba ny bilaogy ao amin'ny firenena Maghreb (Tonizia, Alzeria, Maraoka, Libya & Maoritania).
Manasongadina ireo bilaogera Toniziana toy ny mpisava lalana sy mpitarika bilaogy any amin'ny faritra ny lahatsoratra. Bilaogera Toniziana maromaro no miresaka momba izany: Adib (amin'ny teny Frantsay), Karim sy Marwen. Natao sy navoakan'i Karim tamin'ny aterineto ny lahatsoratra pdf iray natao scan.
Zizou avy any Djerba, izay handao an'i Tonizia atsy ho atsy mba hianatra ao amin'ny AUB any Beirota (amin'ny teny Frantsay), nanontany tena ny amin'izay nanjo an'ireo beriberaToniziana sy ny maha-diso azy mieritreritra fa zavatra tsara ny nandraisana azy ireo ho isan'ny vahoaka ankapobeny. Tsapany ankehitriny fa azo atao ny fampiroboroboana ny kolontsaina marolafy ary maniry izy mba hovelomina indray ao Tonizia ny kolontsain'izy ireo.
Faly i Adib manambara ny fanombohan’ny vavahadim-baovao momba an'i Kelibia (amin'ny teny frantsay), tanàna morontsiraka tsara tarehy ao Tonizia. Ny vavahadim-baovao dia toerana fivoriana an-tserasera ho an'ny mponina ao an-tanàna sy ireo mpankafy azy; manome vaovao momba ny hetsika ara-kolotsaina, fanatanjahan-tena, zavakanto ary hafa bebe kokoa ao an-tanàna.
Manontany tena i Karim hoe ahoana no ahafahan'ny atody omega 3 vaovao, izay vokatra azo avy amin'ny fanovana fototaranaka amidin'ny Al Mazraa (fivarotana vorona ao Tonizia) tsy mitondra karazana marika milaza izany amin'ny mpanjifa, na karazana fanamarinana avy amin'ny governemanta. Manontany tena ihany koa izy mikasika ny lazain'ny lalàna Toniziana mikasika ny vokatra toy izany.
Tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Ejiptiana, nanonofy Ejipta demokratika (amin'ny teny Frantsay) i Houssein ary mieritreritra fa amin'ny andro hitrangan'izany, hanaraka avokoa ny tontolo Arabo, mihevitra fa nanaraka an'i Ejipta tamin'ny fironany ara-poto-kevitra, ara-politika, ara-kolotsaina sy ara-kanto ireo firenena arabo; manomboka amin'ny Islamista, hatramin'ny nasionalisma pan-arabo, sy ny fandaharana malaza amin'ny fahitalavitra ary ireo mpihira malaza.
Nitatitra i Thysdrus fa hitsidika an'i Tonizia amin'ny volana Novambra ny minisitry ny raharaham-bahiny Isiraeliana Silvan Shalom, miaraka amin'i Dalia Isaac, minisitry ny serasera, mba handray anjara amin'ny Fihaonambe Manerantany momba ny Fiarahamonim-baovao.
Miandry ny toeram-pivarotana lehibe indrindra sy vaovao indrindra ao Tonizia , izay antsoina hoe “Tunis City”,ary hisokatra amin'ny 29 Septambra i Marwen, ary manantena fa hanamaivana ny tsindry goavana eo amin'ireo toeram-pivarotana sy magazay hafa izany.
Tom mitatitra ny fiakaran'ny vidin-tsolika vao haingana tany Tonizia (amin'ny teny arabo); ny faharoa tao anatin'ny roa volana. Noho ny vidin-tsolika niakatra manerantany no anton'ny fiakarana.
Nawarat manamarika ny lamaody vaovaon'ny vehivavy amin'ny vanin-taona fararano-ririnina taona 2006 (amin'ny teny Frantsay), mamazivazy fa toa tsy mahafantara ilay gazetibokin-damaody fa mbola tsemboky ny hafanana ny olona ao Tonizia ary mbola mitohy ny varotra fahavaratra.
Nasnoussa manontany (amin'ny teny Frantsay) mikasika ny olona sasany ao Tonizia izay toa vonona handany vola be amin'ny alina iray, kanefa ny hafa tsy maintsy mandany herinandro nefa tsy afaka mividy na mihinana sakafo misy hena akory; ary amin'ny farany dia samy tsy afa-po izy roa tonta.
Zied tsy mahatakatra ny antony itiavan'ny olona sarimihetsika mampihorohoro (amin'ny teny Frantsay). Mihevitra izy fa mitovy daholo ny teti-dratsy ary tsy miova ny teknika rehetra, miaraka amin'ny andiana mpamono olona mipoitra tsindraindray.